Aqooso Somaliland Halka Aad Falastiin Ka aqoonsatey. By Faysal Cadami | Somaliland Today
← Jamaal Cali Xuseen Malaha Aragti Hogaamineed By, Prof.Mohamed Ahmed Farah Mattan (Jaafaa)
Waddani Laanta Alberta Canada .Cambareysay Xubintii Madaxtooyadu Xisbiga Kusoo Celisay →
Aqooso Somaliland Halka Aad Falastiin Ka aqoonsatey. By Faysal Cadami
Wareye Ka mida weriyayaasha ugu Caansan Wadanka Sweden oo magaciisa la yidhaa Per Gudmunsson waxna ku qora joornaalka afkadheer ee SVD oo had iyo jeer u xagliya garabka midigta ayaa Maanta ugu baaqay raiisalwasaaraha Sweden Stefan Löfven iyo wasiirada Arimaha Dibada Margot Elisabeth Wallström, inuu dawlad Madax banaan u aqoonsado Jamhuuriyada Somaliland. Per ayaa soo daabacay Maqaal Uu Ugu Magac Daray Aqoonsada Jamhuuriyada Somaliland Halka aad aqoonsiga kula Degdegteen Falastiin.
Aqoonsiga Falastiin Ma Uu Buuxin sharciga aasaasiga ah ee dawlad Madaxbanaan, taas oo mcnaheedu yahay gacanta uguma jiro dhulkoodu oo ma xukumaan dhulkooda oo dhan.
Taasi uma muuqato wax wanaagsan ururka argagixisada ee Xamaas weli wuxuu gacanta ku hayaa Gasa waxaaany wada shaqyn dhow ka dhaxaysaa dawlada Falastiin.
Aqoonsigani sidoo –
kale wuxuu xadgudub ku yahay nidaamka guud ee midowga Yurub.Sweden way qaldamaysaa oo waxay ka baxysaa go’aankii loo dhamaa ee midowga Yurub gaadhay.
Way adagtahay in cidi guulaysato Sideedaba. Waa dhawaaq aan loo baahnayn in dawlada Sweden ku dhawaaqdo dawladnimada Falastiin.
Haddii xibiyada Casaanka iyo dooga (Red-Green) ama (Röd-Grön) ay doonayaan in ay khasab ku jabiyaan cahdiga midowga Yurub si loo dhiiri geliyo horumarka, Nabada, iyo dimuqraadiyada dunida muslimka waxaa jira musharax ka fiican oo buuxiyey shuruudidii dawladnimo.
Somaliland waxay madaxbanaanideeda la soo noqotay oo ay is xukumaysay ilaa iyo 1991 oo ay Somaliya quustay amaba muquuratey fowdo.
Markii Somaliya inteeda kale uu ka holcay dagaal sokeeye, Jihaad, iyo sharci qabiil, iyo Hogaamiye kooxeedyo, Somaliland waxay ku naaloonaysay in ka badan labaatan sanadood nabad, Xasilooni, Horumar , dibu dhis. Somaliland waxay qabsatay afar doorasho oo dimuqraadi ah oo isku xiga oo dhibaato la’aan ah.
Waxaa laga yaabaa in ay jiraan sharaxaado kale oo taariikhi ah. Somaliland waxay ahayd maxmiyad Ingiriis, Halka inta kale ee gobolka uu gumaysan jirey Talyaanigu. Taasi waa tusaale.
Laakiin Xaqiiqdu waxay tahay in Somaliland u muuqato in laga helay hab si dimuqraadiyad bulsho oo ku salaysan qabiil muslim ah..Taas oo tusaale u noqon karta dalal badan oo soo koraya.
Somaliland wali aduunku ma aqoonsan.Midawga Yurub Wuxuu aaminsanyahay in ay in Midowga Afrika ay qaadaan talaabada ugu horeysa, Lakiin midowga Afrika ayaa waxaa ka taliya kelitaliyayaal aan doonayn in ay arkaan dimuqraadiyad.
Swedn waa in ay dhaqaajisaa balan qaadka aqoonsiga Somaliland ugu dambayn oo ay ku dhiiri gelisaa horumarka wanaagsan ee ay sameeyeen.
Aqoonsiga raysalwasaare Stefan Löfven ayaa xiisad siyaasadeed ka abuurey wadanka sweden ilaa iyo maalintii uu ku dhawaaqay iyada oo siyaasiyiinta iyo xisbiyada garabka midigtu ay ku tilmaaneen arin lagu dedegay.
Halkan hooes ka akhri warka oo Swidhish ku qoran